Galaxy tab ကိုဘယ်လို Root လုပ်မလဲ? - MYSTERY ZILLION
Galaxy tab ကိုဘယ်လို Root လုပ်မလဲ?
Galaxy Tab ကို root လုပ်ပြီး မြန်မာ font သွင်းချင်လို့ပါ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး...
You can root with z4root application
Download link >>> http://www.mediafire.com/?yy2fevbfmyiu1uy
ဗားရှင်းကို လိုက်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။
download fontomizer from Market, and then change font from setting.
Root ကို ခဏပဲလုပ်လို့ရလား? Unroot ဘယ်လိုပြန်လုပ်လဲ? Unroot လုပ်လိုက်ရင် Myanmar Font ပျက်သွားနိုင်လား...
ရပါတယ်ခဏဘဲလုပ်လို့။ z4root မှာဆိုရင် temporary root ဆိုတာပါတယ်လေ
ကျွန်တော်ကတော့ z4root နဲ့အစဉ်မပြေလို့ One-Click Super Root နဲ့ ချတယ်။ font ကတော့ Font Changer app နဲ့ အစဉ်ပြေသွားတယ်။
Huawei C8600ကို one click super root နဲ့ဘယ်လိုRoot ရမှာလဲ။ကူညီပါအုံး။